I-Eco-House Spring (igumbi laseAfrika)
Indlu yethu yindlu ekhululekile enemigangatho emibini eyenziwe ngamaplanga kufuphi nehlathi kwindawo epholileyo eluhlaza kwingingqi yaseMoscow.
Imalunga neekhilomitha ezingama-33 ukuya eMoscow.
Kukho indawo ebiyelweyo enoxolo lwehlathi, indawo yokupaka yasimahla, ibarbecue kwindawo kunye neterrace enkulu, igumbi le-yoga, iprojektha, i-sauna, indawo yomlilo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala angama-4 ahlukeneyo endlwini.
Ukuba ufuna amagumbi amaninzi endlwini, wamkelekile!
Unokuziva ufana nondwendwe olundwendwela abahlobo abalungileyo. Siyathemba ukuba uyakonwabela umoya opholileyo kunye nobushushu beziko endlwini yethu. Siza kukuphatha iti enevumba elimnandi kuyo yonke incasa kunye nombala kwaye sikunikeze yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile kwaye umnandi, nokuba yiholide okanye umsebenzi.
Indlu yethu ikwindawo entle engekude ukusuka echibini kumantla ommandla waseMoscow, kwisithili saseDmitrov, kufuphi nelokishi yaseIksha, kwidolophana yaseTefanovo.
Ilali ijikelezwe ngamahlathi asuka kumacala ama-3.
Kukho umthombo onamanzi okusela acocekileyo kumgama wokuhamba.
Ndizama ukwamkela iindwendwe kwaye sinomlawuli, ohlala ehlala endlwini kwaye unokunceda ngayo nayiphi na imibuzo.